आँखा पोल्ने तथा चिलाउने समस्या छ ? अपनाउनुस् यी घरेलु उपाय ! – Khabar Art Nepal
आँखा पोल्ने तथा चिलाउने समस्या छ ? अपनाउनुस् यी घरेलु उपाय !
By Pasang Tamang	 On १४ फाल्गुन २०७५, मंगलवार ०३:४९
काठमाडौँ । प्राय सबै जसो मानिसहरु जीवनको कुनै न कुनै समयमा आँखा पोल्ने समस्याबाट सताइएको हुन्छ भने कसैलाई यो समस्या बढी नै हुन्छ।दुखाइको अवस्था अनुसार पिडित व्यक्तिमा हेर्ने तथा पढ्ने कुरामा समेत यसले असर गर्दछ। आँखा शरीरको सबैभन्दा सम्वेदनशील अंग भएकोले साना साना कुराहरुले पनि यसलाई असर पुर्याइरहेको हुन्छ।
धेरै जसो आँखा पोल्नेसमस्या क्षणिक समयको लागि हुन्छ तर कहिले काहिँ यो लामो समयसम्म पनि रहन्छ । यद्दपि आँखा पोल्ने समस्या आन्तरिक रोगको संकेत हो र यसलाई तुरुन्तै परिक्षण गरेर उपचार गर्नुपर्दछ । आँखा पोल्ने समस्या एकदम धेरै छ, छिनछिनमा पोल्छ भने यस्तो पोलाई आन्तरिक कारणबाट नभइ बाहिरी कारण जस्तै धूवाँ, धूलो आदि कारणले हुन्छ।
यस्ता छन् कारणहरु :
लगातार टि. भि. अथवा कम्प्युटरमा हेर्नु अथवा चोटपटक लाग्नाले पनि आँखा पोल्छ । सामान्यतया निम्न अवस्थामा आँखा पोल्ने गर्छ ।
१) लामो समयसम्म घाममा बस्नु
२) हिउँ अथवा पानीमा हेरिराख्नु
३) आँखामा साबुन अथवा स्याम्पु पर्नु
४) आँखामा चोट लाग्नु अथवा आँखा दुख्नु
५) कन्ट्याक्ट लेन्सको प्रयोग गर्नु अथवा एलर्जीको कारण पनि आँखा पोल्न सक्छ।
त्यस्तै गरी अत्यधिक थकाइ तथा पर्याप्त निन्द्राको अभावले पनि आँखा पोल्दछ। आँखा पोल्ने समस्या जो कोहिलाई पनि हुनसक्छ र यो जुनसुकै मौसममा पनि हुन सक्छ । आँखा पोलाइ अत्यधिक बढेमा आँखा रातो हुन गइ पाक्न थाल्दछ।
जसलाई औषधि विज्ञानको भाषामा पिङ्क आइ (आँखा पाक्ने) भनिन्छ । यस्तो अवस्थामा पिडित व्यक्तिलाई हेर्न समस्या हुनुको साथै आँखाबाट आँसु आउने साथै सेतो पदार्थ (चिप्रा) बग्न थाल्दछ । आँखा पाक्ने समस्या एकदम छिटो गतिमा एकबाट अर्कोमा सर्दछ।
फोहोर वातावरणबाट अलग रहि डाक्टरको सल्लाह अनुसार आँखामा प्रयोग गर्ने औषधिको प्रयोग गरी आँखा पोल्ने अथवा दुख्ने समस्याबाट मुक्त हुन सकिन्छ। आँखा अति नै सम्वेदनशील हुने भएकोले जथाभावि औषधिको प्रयोग भने गर्नु हुँदैन । साथै फोहोर हात तथा कपडा पनि प्रयोग गर्नु हुँदैन।
सेनाका अफिसरका दुई छोरीले गरे यस्तो काम, जसलाई पूरै देशले गर्व गरेका छन्